200A Qalabka Qalabka Soo-saareyaasha & Alaab-qeybiyeyaasha | Shiinaha 200A Cable Accessories Warshad
Anhuang oo ku takhasusay Xannibaadda Qulqulka Suxulka, waxaannu siineynaa Xusul-qallajiye Sare oo tayo sare leh. Alaabtayadu waxay waafaqsan yihiin IEEE386, iyo heerarka IEC. Hordhac: 17 / 50kV xayiraadda Xusulka Gacan-ku-ridaha oo leh guryo isku xira caag silikoon ah oo lagu rakibay 200A Load jabinta fidiyaha fidiyaha. Waxay ilaalisaa shabakadda danab dhexdhexaadka ah, tusaale ahaan: tarbiyeyaashu waxay beddelaan qalabka iyo fiilada. Soo galitaanka hirarka danab iyo kororka danab ee milicsiga waa xaddidan yihiin. Sharaxaad Tixraac Maya oper Sii socda ...
24kV Loadbreak Suxulka Soo Kordhinta Arrester
Anhuang oo ku takhasusay Xannibaadda Qulqulka Suxulka, waxaannu siineynaa Xusul-qallajiye Sare oo tayo sare leh. Alaabtayadu waxay waafaqsan yihiin IEEE386, iyo heerarka IEC. 34kV Surge Arrester Insert waxaa si balaaran loogu adeegsadaa shabakada danab dhexdhexaadka ah, sida Transformers waxay badalaan qalabka iyo fiilada iyo qalab kale. Qaab dhismeedka wax soosaarka 1. EpDM INSULATION: Nadiif tayo sare leh oo daaweyn ah daaha EPDM waa la isku qasan yahay oo lagu qaabeeyey guriga dhexdiisa si buuxda loogu xakameeyo sifooyinka caagga dahaarka. GOLAHA SHAQAALAHA SEMI-CONDUCTIVE: Qaab-dhismeedka-Qaab-dhismeedka ...
Kacsi galinta Xadgudubka
Anhuang oo ku takhasusay Gantaal Soo-kicinta Xannibaadda, waxaan bixinnaa tayo-sare sare ee Xusul-Xirashada Gawaarida. Alaabtayadu waxay waafaqsan yihiin IEEE386, iyo heerarka IEC. 17 / 50kV Surge Arrester Insert waxaa si weyn loogu adeegsadaa shabakada danab dhexdhexaadka ah, sida Transformers korantada iyo biraha iyo kuwa kale, oo loo istcimaalo qalabka xarkaha wiishka sida xarkaha xusulka duurka iyo daboolka ilaaliyaha. Qaab dhismeedka wax soosaarka 1. EpDM INSULATION: Tayada sare ee baaruudda lagu daaweeyay ningax EPDM waa isku dhafan yahay oo la diyaariyey ...
15Kv25Kv Kordhinta Kordhinta
Anhuang oo ku takhasusay Fasalka Bushing Extender, waxaan siineynaa tayo sare oo Class Bushing Extender. Guud ahaan ： 600A bushing extender waxay u oggolaaneysaa rakibida isweydaarsiga dhimista caadiga ah ee 600A ee isku-xirnaanta yareynta fiilooyinka qasabadda, isku xiridda fiilooyinka iyo duurka qalabka. 200A Load goos goos goobeed u ah Xusulka soo kicinta iyo xusulka isku xira. Marka lagu soo ururiyo qalabka isweheshiga, waxay siisaa gabi ahaanba quusin, si buuxda u gaashaaman. Tusmada Qalabka: EPDM bushing fidiyaha Paper Paper ...
Hordhac: 15kV 200A Load break Elbow Connector waa gabi ahaanba gaashaan iyo caymis joojinta plugin ee isku xidhka fiilada dhulka hoostiisa ah si loogu qaybiyo nidaamka awooda qaybinta qalabka wax lagu beddelo, wareegga sanduuqa laanta korantada, sanduuqa laanta fiilada ee ku qalabaysan bushings load. Suxulka isku xiraha iyo gelinta duurka waxay ka kooban yihiin waxyaabaha lagama maarmaanka u ah dhammaan iskuxirka biririfta xamuulka. Waxay dabooli kartaa baahida loo qabo khadadka nukliyeerka. Codsiga ： Loadbreak xusulka isku xira waa mid si buuxda u gaashaaman oo ku jira ...
Anhuang oo si gaar ah ugu takhasusay Bushing-ka, waxaan si fiican u siinnaa Bushing tayo sare leh. Alaabtayadu waxay waafaqsan yihiin IEEE386, iyo heerarka IEC. Hordhac: 15kV / 24kV 200A Bushing Well waxaa si ballaaran loogu isticmaalaa wareegga korantada sare ee suufka suufka lagu rakibay, qalabka wax lagu beddelo, qalabka wax lagu beddelo, iwm. jebinta duurka. Duurka waxaa loo isticmaalaa qalabka fiilooyinka sida: duudduub gelinta, Wareegtada F ...
15kV 200A Gali Bushing
Anhuang oo ku takhasusay Bushing insert, waxaan ku siineynaa tayo sare oo Bushing ah. Alaabtayadu waxay waafaqsan yihiin IEEE386, iyo heerarka IEC. Hordhac: 15kV 200A Duubista xargaha dunta duurjoogta adduunka oo dhan si ay u siiso shaqo la mid ah duurxulida xamuulka aan caadiga ahayn. Adeegsiga waxyaabaha lagu rakibo duurka waxay ka dhigeysaa rakibidda duurka iyo beddelkiisa mid suurtogal ah oo waxtar leh. Waxyaabaha lagu shubo iyo xusullada isku xirayaasha ayaa kor u qaadaya waxyaabaha lagama maarmaanka u ah dhammaan iskuxirka biririfta xamuulka. Gelinta bushes-ka waxay isticmaashaa shati ...
Anhuang oo ku takhasusay Load break Elbow Connector, waxaan siineynaa Loadbreak Suxul Xirashada tayo sare leh. Alaabtayadu waxay waafaqsan yihiin TEEE386, iyo heerarka IEC. Hordhac ： 25kV 200A Load break Elbow Connector waa xirxir buuxa oo gaashaaman oo caymis ka joojinaya fiilada dhulka hoostiisa ku xira nidaamka awooda qaybinta ee qalabka wax lagu beddelo, wareegga sanduuqa laanta korantada, sanduuqa laanta fiilada ee ku qalabaysan bushings load. Xulka suxulka iyo gelinta duurka waxay ka kooban yihiin ...
Anhuang oo ku takhasusay Loadbreak xusulka isku xira, waxaan siineynaa Loadbreak xusulka isku xira tayo sare leh. Alaabtayadu waxay waafaqsan yihiin IEEE386, iyo heerarka IEC. Hordhac: Xirxiraha Xusulka ayaa ah gebi ahaanba gaashaan iyo cay cay ah oo ku xirmaya xarigga dhulka hoostiisa ah ee qaybinta nidaamka awoodda qaybiyaha qalabka wax lagu beddelo, wareegga laanta korontada ku xeeran, sanduuqa laanta korontada oo ku qalabaysan bushings load. Xiraha suxulka iyo gelinta duurka waxay ka kooban yihiin qaybaha lagama maarmaanka u ah loa oo dhan ...
15kV 200A Wareeg Feedthru Gal
Anhuang oo ku takhasusay Galinta Gawaarida Gawaarida, waxaan ku siineynaa tayo sare leh oo loo yaqaan 'Rotatable Feedthru Insert'. Badeecaddu waxay buuxineysaa dhammaan shuruudaha IEEE Standard 386 waana mid si buuxda loogu beddelan karo alaabada tartame. 15kV 200A Mawduucyada rogrogmi kara ee fiilooyinka geliya duugista guud si wanaagsan si ay u siiso shaqo la mid ah sida buurburinta lowska muhiimka ah. Adeegsiga waxyaabaha lagu rakibo duurka waxay ka dhigeysaa rakibidda duurka iyo beddelkiisa mid suurtogal ah oo waxtar leh. Bushing gelinta iyo xusullada xirayaasha ka kooban t ...
Anhuang oo ku takhasusay Galinta Gawaarida Gawaarida, waxaan ku siineynaa tayo sare leh oo loo yaqaan 'Rotatable Feedthru Insert'. Alaabtayadu waxay waafaqsan yihiin IEEE386, iyo heerarka IEC. Hordhac: 24kV 200A Qalabka wax lagu beddelo ee loo yaqaan 'Rotatable feedthrough insert' waxaa loo isticmaalaa in lagu bixiyo laba duudood oo laga soo qaado hal qalab oo si fiican u duulaya。 Waxay ka dhigeysaa u beddelashada tarbiyeyaasha radial-feed inay quudiyaan kuwa wax beddelaya oo ay ku darsadaan ilaalinta qadka tooska ah labadaba fudeyd iyo ficil ahaanba. Xuquuqdeeda, kudhisan tiknoolajiyada xaddidan ratchet waxay ka hortageysaa hawlwadeennada si kama 'ah ...
Anhuang oo ku takhasusay Bushing insert, waxaan ku siineynaa tayo sare oo Bushing ah. Alaabtayadu waxay waafaqsan yihiin IEEE386, iyo heerarka IEC. Hordhac: 24kV 200A Duubista xargaha dunta duurjoogta adduunka oo dhan si ay u siiso shaqo la mid ah duurjoogta xamuulka jaban. Adeegsiga waxyaabaha lagu rakibo duurka waxay ka dhigeysaa rakibidda duurka iyo beddelkiisa mid suurtogal ah oo waxtar leh. Waxyaabaha lagu shubo iyo suxulka isku xirayaasha waxay ka kooban yihiin qaybaha lagama maarmaanka u ah dhammaan iskuxirka biririfta xamuulka. Gelinta duurka waxay isticmaashaa w ...